ဘာဖြစ်မှန်းကို....မသိလို ့ပါ...ကယ်ကြပါအုံး — MYSTERY ZILLION
အဲဒီတုန်းက..ရေးပြီးရင်..ကျွန်တော်..စက်မှာ...Run..Run သွားတာ...သူပြန်ပြီးတော ့တော ့
ကျွန်တော်က ပြောတော ့....သူတကယ်မနိုင်လို ့ပါ ဆို ပြီး...
့ပြီးတော ့..Virus အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောသွားတယ်ဂျ..
အဲဒီVirus က..ဒီအတိုင်းဆို..ဘာမှ မလုပ်ဘူး...
တစ်ခြားVirus ဝင်လာတော ့မှ...အဲဒီVirus နာမည်နဲ ့...သောင်းကျန်းတယ် ....အဲဒီ Virus ကို သတ်လိုက်ရင်...သူလည်း..ပြန်ငြိမ်သွားမယ်တဲ ့...တစ်ခြား...Virus အဝင်မခံနဲ ့တဲ ့...
သူနဲ ့လည်းမတွေ ့ဖြစ်တော ့ပါဘူးвЂ¦.
အဲဒီနောက်ပိုင်းвЂ¦.ဒီလိုပဲ вЂ¦Virus တွေ ဝင်လာလိုက်вЂ¦ဟိုကောင်က..သောင်းကျန်းလိုက်နဲ ့вЂ¦.
ကျွန်တော်က သတ်လိုက်နဲ ့вЂ¦လုံးလည်ချာလည်вЂ¦လိုက်နေတာвЂ¦
အဲвЂ¦ဒီတစ်ခေါက်ကျတော ့вЂ¦I love U virus လေ..သိတယ်မလားвЂ¦
အဲဒီကောင် ဝင်လာလို ့..သွားသတ်လိုက်တာвЂ¦
တိုင်ပတ်ပါလေရောဂျာвЂ¦.Virus တော ့သေသွားတယ်вЂ¦
Registryထဲကနေ သတ်လိုက်တယ်ဂျာвЂ¦.ပြီးတော့Hidden Files တွေကို
အဲဒီမှာ..စတာဗျာвЂ¦Folder Option က ဝင်လို ့ရတယ်вЂ¦.Show hidden လုပ်လို ့မရတော ့ဘူးဂျာвЂ¦.သေရောвЂ¦နောက်နေ ့တွေလည်းကျရောвЂ¦.window က ဒုက္ခစပေးတာဂျвЂ¦
Run နေရင်းနဲ ့вЂ¦.ဟမ်းвЂ¦ဟမ်း..သွားတယ်вЂ¦.
အဲဒါနဲ ့စိတ်တိုပြီးတော ့вЂ¦..window ပြန်တင်လိုက်တာвЂ¦ဘာမှလုပ်လို ့ကိုမရတော ့တာвЂ¦
ဘယ်လောက်ဆိုးလဲ ဆိုရင်вЂ¦..Bios setting ထဲကвЂ¦ C mos ဝင်တာတောင်вЂ¦ဟမ်းတယ်ဗျာвЂ¦
Window လည်းတင်ရောвЂ¦မတတ်တော ့ဘူးвЂ¦
ဟို files ပျောက်တယ်вЂ¦ဒီ files ပျောက်တယ်လုပ်နေတယ်вЂ¦
အဲဒါвЂ¦Fdisk နဲ ့вЂ¦.Partition ပိုင်းတာвЂ¦Logical partition မရှိဘူး
Window boot files ပျောက်တယ်ထင်ပြီး..စမ်းတော ့လည်းမရဘူးвЂ¦
CPU ကို လည်းвЂ¦ဖြုတ်ပြီးвЂ¦.ဖုန်ထုတ်လိုက်တော ့..ကောင်းသွားတယ်ဂျвЂ¦
အဲဒါနဲ ့вЂ¦အခုвЂ¦window အသစ်မှာвЂ¦.ကျွန်တော် External HDD ပြန်လည်းထိုးလိုက်ရောвЂ¦
Window ကပြန်နှေးသွားပြီးвЂ¦..Folder option ကလည်းвЂ¦show hiddenвЂ¦ပြန်ဖြစ်သွားတယ်
ကူညီကြပါအုံးနော်вЂ¦вЂ¦:77::77::77::77::77:စာရှည်သွားလို ့တော ့вЂ¦စိတ်မဆိုးကြပါနဲ ့вЂ¦သမိုင်းကြောင်း အစအဆုံးသိအောင်вЂ¦ရေးလိုက်တာပါ
Memory ပျက်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အသစ်နဲ့လဲစမ်းကြည့်ပါလား။ :39:
၀င်းဒိုးပြန်တင်တော့ ပါတေးရှင်းအားလုံးကို ပိုင်းရဲ့လား..။ ပို်င်းလို့မရရင် boot cd ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါဦး.. တခါတလေ စီဒီကလည်းကြောင်တတ်တယ်.။ တစ်စစီဖြုတ်တဲ့ထဲမှာ CMOS Battery ကောပါလား..? External Harddisk ထဲမှာ ဗိုင်းရပ်စ်၀င်နိုင်တာကို သိရက်နဲ့ ပြန်တက်တာက ဆိုးတာပဲ..။ ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့ရင် ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါလား..
ဟိုတစ်ခေါက်က Time to Time ဂျာနယ်ထဲမှာရေးထားတာ.. ၀င်းဒိုးကို Fat 32 စနစ်သုံးတဲ့ စနစ်ဟောင်း၀င်းဒိုးတွေ သုံးပြီး DOS နဲ့ သတ်လို့ရတယ်လို့ဖတ်လိုက်ရတယ်..။ နာမည်ကြီး ဗိုင်းရပ်စ် One Miss Call လို့ခေါ်တဲ့ svchost.exe ကိုလေ.. အစ်ကို့ဟာကိုကော..စမ်းကြည့်ပါလား...။ အကောင်းဆုံးအကြံပေးချင်တာကတော့ နောက်ဆို ဗိုင်းရပ်စ်ရေးသူကို ကိုယ့်စက်ကိုပေးမသုံးပါနဲ့လား.. အဆိပ်ပင်ရေလောင်းသလိုဖြစ်နေလို့ပါ.. သူများကိုဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တာတော့ကောင်းပါဘူး
ဆိုင်တယ်ဗျ အစ်ကိုရ IDE ကြိုးကြောင့် (သို့) ပါဝါကြိုး လွှတ်လို့လဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အဲဒီ External HDD မှာ virus ရှိနေသေးလို့ပါ။ show hidden ကိုရအောင်ဖော်ဖို့အတွက်က RRT ဆော့ဝဲလ်လေးနဲ့စမ်းကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့အဲဒါနဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။
အကိုတို ့ပြောသလို....ကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျ...ကျေးဇူးလည်းအရမ်းတင်ပါတယ်....ဒါပေ ့မယ်...ကိုညမီးအိမ်ပေးတဲ ့...လင့်လေးက...ဒီကွန်နက်ရှင်နဲ ့....Access has been denied တဲ ့...အဟင် ့...ကံဆိုးထီးသွားရာ...မိုးကြိုစောင့်နေတယ်...:((:((:((:((